गायिका प्रविशा अधिकारीले गरिन् विवाह, के गर्छन् उनका वेहुला ? – List Khabar
Home / जीवनशैली / गायिका प्रविशा अधिकारीले गरिन् विवाह, के गर्छन् उनका वेहुला ?
गायिका प्रविशा अधिकारीले गरिन् विवाह, के गर्छन् उनका वेहुला ?
admin November 21, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 333 Views
रक्षा गरुन,असार २० गते सोमबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
रक्षा गरुन,असार १९ गते आईतबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
काठमाडौं । गायिका प्रविशा अधिकारी वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएकी छन् । पछिल्लो समय ‘द भ्वाइस किड्स २०२१’ कि कोच रहेकी प्रविशाको आइतबार विवाह भएको छ ।
उनले प्रेमी निर्माण सिटौलासँग विवाह गरेकी हुन् । उनीहरुको गएको बिहीबार इंगजमेन्ट भएको थियो । निर्माण लामो समयदेखि अमेरिकाको भर्जिनियामा बस्दै आएका थिए । पेसाले उनी इन्जिनियर हुन् ।
प्रविशा र निर्माण दुवै झापाका हुन् । गायिका प्रविशाले पछिल्ला केही महिनायता आफ्नो प्रेम सम्बन्धका बारेमा मिडियामा खुलेरै कुराकानी गर्दै आएकी थिइन् ।
भर्खरै डिभोर्स गरेका आमिर खानले गरे तेस्रो विवाहको तयारी, यि हुन् नयाँ वेहुली ?
काठमाडौ । बलिउडमा विवाहको सिजन चलिरहेको छ । भर्खरै राजकुमार राव र पत्रलेखाले नयाँ जीवन सुरु गरे र अब सबैको नजर क्याट्रिना कैफ र विक्की कौशलको विवाहमा छ, जुन डिसेम्बरको दोस्रो हप्तामा हुनेछ। तर, अब आमिर खानले पनि तेस्रो विवाह गर्ने खबर बाहिरिएको छ । हालै आमिर खानले आफ्नी श्रीमती किरण रावसँग अचानक डिभोर्स गरेका छन् । त्यही क्रममा दुवैले अब हामी दुवै श्रीमान्–श्रीमती नभई सह–अभिभावक बनेर एकअर्काको परिवार बन्ने विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । आमिर खान र किरण रावको यो बयानले मानिसलाई छक्क पारेको थियो ।
आमिर खानले कोसंग गदेैछन् विवाह ?
यसैबीच, अहिले सामाजिक सञ्जालमा आमिर खान तेस्रो विवाह गर्ने योजनामा ​​छन् र अभिनेता चाँडै नै तेस्रो विवाह गर्ने तयारीमा रहेको चर्चा छ । आमिर खानले आफ्नो आगामी फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ को रिलिजपछि विवाहको घोषणा गर्ने दाबी गरिएको छ । फिल्म अर्को वर्ष अप्रिलमा रिलिज हुँदैछ । जसका कारण आमिरले आउँदो वर्ष अप्रिलमा फ्यानलाई आफ्नो विवाहको जानकारी दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यति मात्र होइन, गसिपलाई विश्वास गर्ने हो भने आमिर खानले आफ्ना एक सहकलाकारसँग विवाह गर्ने छन् ।
आमिर खान, फातिमा सना शेख
आमिरको डिभोर्सपछि फातिमा सना शेख ट्रोल भइन्
आमिर खान र किरण रावको अचानक डिभोर्स भएपछि अभिनेत्री फातिमा सना शेख सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल भइन् । फातिमा आमिर खानसँग फिल्म ‘दंगल’ र ‘ठग्स अफ हिन्दोस्तान’मा देखिएकी थिइन् । आमिर खान र फातिमा सना शेख रिलेशनशिपमा रहेको हल्ला चलेको थियो । तर, विस्तारै यो हल्ला शान्त हुँदै गयो ।
आमिर खानले दुई बिहे गरेका थिए
आमिर खानले अहिलेसम्म दुईवटा विवाह गरिसकेका छन् । अभिनेताले सन् १९८७ मा रीना दत्तसँग पहिलो विवाह गरेका थिए । दुवैले सन् २००२ मा सम्बन्धविच्छेद गरेका थिए । यसपछि आमिर खानले किरण रावको हात समाए तर दुवैको स म्ब न्ध पनि लामो समय टिक्न सकेन । आमिर खानका इरा खान, जुनैद खान र आजाद राव खान नामका तीन सन्तान छन् ।
Previous बिवाह गर्न लागेका कट्रिना कैफसंग रिसाए विक्की कौशल, दुईबीच यसकारण भयो ठूलो विवाद
Next २ सय भारतीय सैनिकहरु यसरी फसे पाकिस्तानी इन्टेलिजेन्स एजेन्ट सुन्दरीको जालमा
यस्तो लक्षण भएका श्रीमतीले चम्काउँछन् ! श्रीमानको भाग्य एकपटक पढ्नुहोला
शा’रिरिक बनावट अंग रुप रेखाले व्यक्तिको भविष्यवाणी गर्ने कुरा समुन्द्र शा’स्त्रमा उल्लेख रहेको छ । …